နို့မှုန့်ဟာ တကယ်ပဲ ကလေးငယ်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးအာဟာရလား? – BurmeseHearts
နို့မှုန့်ဟာ တကယ်ပဲ ကလေးငယ်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးအာဟာရလား?
နွားနို့ ၊ ဆိတ်နို့တွေကို လူနို့နဲ့ အာဟာရဓါတ်တူအောင် ပြုလုပ်ထားပေမယ့်လည်း တရိစ္ဆာန်နို့ဟာ တရိစ္ဆာန်နို့ပဲ မဟုတ်လား။ တရိစ္ဆာန်နို့ဟာ လူနို့တော့ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့်လည်း နို့မှုန့်ဗူးတွေမှာ “မိခင်နို့နှင့် အတတ်နိုင်ဆုံးတူအောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်”လို့ မထင်မရှားပါရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုက တရိစ္ဆာန်နို့တွေကို သောက်စို့ကြပါလို့ သွယ်ဝိုက်အသိပေးထားရတာပါ။
မိခင်နို့ကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သောက်စို့ခွင့်မရတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်သာ နို့မှုန့်ဟာ အားထားရာပါ။
မိခင်နို့နဲ့နို့မှုန့် ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ်လို့ သိသာနိုင်သလဲ?
နို့စို့ကလေးငယ်တွေအတွက် အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်လဲ?
ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဟာ မှားယွင်းနေပြီလို့ လူကြီးမိဘတွေက ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ဆံပင်ကျွတ်သက်သာအောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးဆပ်နေခြင်းမဟုတ်ရပါ
ခင်ပွန်းကောင်း ၊ ဖခင်ကောင်းကိုမှ လက်တွဲလိုသူ အမျိုးသမီးများအတွက်
Join our team as Sales Consultant!
ကလေးကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းကျောင်းသွန်သင်ချင်သော မိဘများမှတ်သားဖွယ်
© 2021 - BurmeseHearts. All Rights Reserved.